HomeChampions LeagueKulamada Champions League Ee Caawa : Qisooyinka Ku Qarsoon, iyo Xallada Laga Filayo
Inkasta oo ay qurux badnaan lahayd labada kulan ee caawa la ciyaarayo oo mid xaga dambe inoogu dhaco oo aanay mar soo wada dhicin, ama habeen dambe mid la inoogu rido , caawana mid habeen dambe ah la inoo soo raro, si aynu labadan ciyaarood laba wakhti oo kala duwan ugu kala daawano , hadana taasi qoraalka kama hor joog sanayso mana soo gaabinayso sheegida xiisaha iyo xallada ku duugan kulamadan caawa ee ay ka qayb gallayaan saddex kamid ah kooxaha loo saadaalinayo ku guulaysiga horyaalka kooxaha Yurub ee sanadkan.
– Sidee David Moyes-ka wali ku jira xaalada adagi u dhaafi karaa, natiijo fiicana uga kasban karaa , kulankan uu ka hor-tagayo, tababaraha guushiisu baro dhaafisay guuldarooyinka tirada yar ee uu la kulmay intii uu ciyaaraha ku soo jiray xaga tababarenimo ee Pep Guardiola?.
– Dhaawaca Victor Valdes maka dhigi doonaa Barcelona mid ay ku adkaato dhaafideedu kooxda awooda aan la yaraysan karin la soo baxday ee Atletico Madrid oo ay La Ligaha Spaina isku eedeen ?
Halkan waxaan isku dayi doonaa inaan ku soo koobno, arimaha cajiibka ah, iskuna dhafan ee ku jira ciyaaraha caawa. akhriste adna salaadaasha aad niyada ku hayso ee ah , cida u soo bixi karta Semi-final-ka Champions League, ku qor qaybta hoose ee [comments-ka):
Waxa wax laga naxo ah, in kooxdii Machester United ee awooda badnaanteeda sida weyn looga cabsan jiray, ay todobaadkii hore maalintii isku aadka la soo saarayay ahayd , mid koox kastaa ay alla baryeysay ku beegideeda ama isku dhaceeda iyo in lagu beego.
Taasna waxa sabab u ah, xiliga adag ee ay dhex mushaaxday intii uu haystay tababare David Moyes, arintaasi oo gayaysiisay inay aad uga laciif sanaadaan marka loo eego awooda kooxihii ku guulaystay Horyaalka Champions League labadii sanno ee u dambeeyey. Inter Milan-2010 iyo Chelsea-2012.
Is Barbardhiga Qiyaasahan ayaaba inoogu filan saadaasha qayb dhan oo kamid ah qormadeena.
Marka la eego Baaska ay isku dhiibtay Bayern Munich ee dhamayska tirmay oo ah 250 halkii kulanba, oo aad uga badan Tirada lamidka ah ee United, iyo celceliska ah 2.9 gool ama saddex gool oo inyar dhiman ciyaar kasta, halka Man United uu yahay 1.5 gool ciyaar kasta, waa natiijo wax ku ool ah oo inoo iftiiminaysa awooda sare ee kooxda Horyaalka Difaacanaysa ee Munich, oo uu xataa caawa ka maqan yahay Thiago Alcantara.
In kastoo Manchester United ay dib u soo noqosho yaab leh samaysay gurigeedana guushii soo bixitaankeeda ka masuulka ahayd ka gaadhay kooxda Olympiakos, iyadoo ay ilkaha ka soo gurtay kooxda Manchester City, hadaba bal malee, United oo sidata guushii 4 iyo 1 gool ahayd ee ay ka gaadhay Aston Villa, sow ma jirto , rajo iftiiminaysa inay ku durdurin karto kulanka caawa.
Kabtanka kooxda Bayern, Bastian Schweinsteiger oo todobaadkii hore ka hadlay kulanka caawa iyo rajada kooxdiisa ayaa ku yidhi jariidada France Football oo wax ka weydiisay sidan: "Ma dhicin 21 kii sanno ee u dambeeyey koox Champion league ku guulaysatay inay sanadka dambe xejisato , waana taas rajada aanu qabno inaan maanta ka dhabaynaa.”
Warbaahinta Germalka ah ayaa qortay in dhaleecaynta kaliya ee loo hayo Pep Guardiola, ay tahay fahanka iyo ku hadalka luuqada Germalka ah oo ku adag kadib markii uu is raaciyey saddex jeer kalmada .|Top-Top-Top| oo ku fiicnayd kaliya |Top-top|, laakiin malaha odaygu kalmada kasta oo uu isticmaalaaba waa mid uu u qalmo oo uu gaadhay halka tababaraha ee caawa wajahayo ee Moyes isagu uu ku isticmaali karo kaliya "Riyo”.
Guntii iyo Gunaanadkii , weynu qirsanahay awooda Bayern Munich , laakiin waxa la filan karaa Mucjiso dhacda iyo United oo Guul lagu tanaado ku sugta lugta kale ee ay ku kulmi doonaan Aliez Arenaha qayb ahaan laga xayiray taageerayaasha.
Laba iyo toban bilood ka hor, Barcelona waxay ku simbiririxatay Paris Saint-Germain tartanka oo marxaladan maraya, waxaana dhaawac soo gaadhay Lionel Messi oo la arkayay isagoo lugta dhulka dhigi kari la’, is aragii labaad ee guriga Barca la isla Yimidna wuxuu ku bilowday kursiga kaydka, laakiin markii uu soo gaallay ciyaarta wuxuu u wareejiyey sida saacada wareegeedu u shaqeeyo oo kale.
Sidaas oo kale , caawa waxa meeshaba ka maqan Victor Valdes oo dhaawac jilibka ahi galaaftay mustaqbalkiisii ciyaareed , waxaana loo diray jiif todoba bilood ah, fursadani waxay faaiido u tahay goolwadaha labaad ee naadiga. Jose Pinto oo 38 jir ah.
Goolwade Pinto ayaa bedel suge uun ahaa, tan iyo markii uu kooxda ku soo biiray oo ahayd 2008 dii. waxaana gayaysiiyey xaaladaasi , waa rikoodhka gooldhalinta ee ah * 62 in laga dhaliyey 79 kulan oo safka hore lagu bilaabay (caadiyan ciyaaraha koobka boqorka ayuu line up yahay) , taas oo geysay inuu xaga qiimaynta ka hooseeyo Valdes , oo loo arko inaanu ahayn goolwade badbaadin badan laga filan karo.
Waxa kale oo Barcelona aad loogu dhaliilaa difaac xumada haysata, qaybta dambe ee naadiga awooda badan ayaa laga dayriyaa xili ciyaareedyaddii uu dambeeyey oo dhan, wallow aad moodo habeenadan u dambeeyey inaan u jilicsanayn sidii usha boocda ah ee ay awal ahaan jireen.
Atletico Madrid. oo iyadu guulaha ay gaadhaysaa soo kordhayaan mudooyinkan dambe oo dhan , koox laga cabsadana noqotay , waxaa dirqi iyo barbaro kaga baxsatay Barcelona , ciyaartii horyaalka ahayd ee isugu dambeysay.
Atletico waxay haysaa hogaanka Horyaalka Spain oo laga furfuri la yahay , waxaanay hore ugu soo guulaysatay Horyaalka labaad ee Yurub iyo Copa Dela Ray sanadkii aynu soo dhaafnay.
cadaymahan oo dhan oo lagu daray dhaawaca Victor Valdes iyo goolwadaha labaad ee safka ku jira ee Jose Pinto ma noqon doonaan kuwo ka caawiya mid ka gudubta mid ka mid ah kooxaha ugu awooda badan caalamka.?
Bal Aan Eegno …………………..